Fuduka kwi-CMS uye kwi-CMS | Martech Zone
Fuduka kwi-CMS uye kwi-CMS
NgoLwesine, Meyi 16, 2013 NgoLwesine, Meyi 16, 2013 Douglas Karr
I-WordPress, iJoomla, i-K2, iDrupal, i-TYPO3, iBlogger, iTumblr… ngaba wakha wafuna ukufuduka usuka kwenye indawo uye kwenye? Sinazo kwaye zihlala zibuhlungu kwaye zifuna itoni yemizamo yesandla. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa nokuba ungawudlulisa umxholo, awusoloko ujongana nabasebenzisi, udidi kunye neetekisi zetekisi, ii-URL slugs, amagqabantshintshi okanye imifanekiso. Ngamafutshane, ibisoloko ingumsebenzi omninzi… kude kube ngoku.
UAlex Griffis, I-CTO yeMaxTradeIn (indawo emnandi ye- ukuthengisa kwimoto yakho), wandixelela malunga CMS2CMS ngokuhlwanje. I-CMS2CMS iyilele ukudityaniswa kwebhulorho ehambisa ngokulula umxholo ukusuka kufakelo olunye oluqhelekileyo kwezi nkqubo zolawulo lomxholo zingasentla zisiya kwenye.
Ixabiso lingaphaya kokufikelelekayo nge- $ 29… ngenkxaso (ikhonkco lethu lokudibanisa libandakanyiwe ngasentla). Faka nje ifayile yebhulorho ukulawula unxibelelwano kwaye ukulungele ukuya!
tags: zeblogacms2cmsInkqubo yolawulo lomxholodrupalJoomlaK2hambisa iBloggerfuduka cmshambisa iDrupalfuduka uJoomlafuduka K2hambisa iTumblrfuduka TYPO3hambisa iWindowsPressTumblrTYPO3WordPress
Isiqingatha-sobomi beMedia Media
Isikhokelo saBaqalayo kuThengiso loMxholo